LastPass ghotara odi nma ma dọọ ndi oru ya aka na ntị ka ha gbochie ha | Esi m mac
Nchedo paswọọdụ ọrụ ịntanetị bụ akụkọ, ọ kwesịghị ịbụ. Examplesfọdụ ihe atụ ndị na-adịbeghị anya bụ ndị e chere hacking nke ọtụtụ puku ihe ndekọ iCloud, na-enweghị ntụkwasị obi site n'ụzọ ma ọ bụ ọtụtụ narị nke okwuntughe Evernote ma ọ bụ Dropbox. Nkwado kachasị mma iji zere ihe ndị a na-atụghị anya ya bụ ịgbanwe okwuntughe maka ọrụ anyị mgbe niile.
Ikpeazụ izu ụka paswọọdụ ọrụ LastPass, chọpụtara na ọ dị mfe na sistemụ gị. Ọ na-ekele na ị na-ekweta na nsogbu na njikere ọrụ na iji gbochie oke njọ. Site n'oge ụfọdụ, anyị amụtala banyere ọdịda ndị a site n'aka ndị ọzọ, nke a ekwesịghị ime.
LastPass na-atụ aro ịgbaso usoro mgbochi ụfọdụ, ka ị na-arụ ọrụ na njedebe mmechi nke njedebe. Recommendationsfọdụ na-atụ aro bụ ọnyà na ọdịdị, ya mere ihe ọ bụla onye ọrụ nke LastPass ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ọrụ ga-gaa na akaụntụ. Ezubere otu karịsịa iji gbochie enweghị ike ịchọpụta emetụta ndị ọrụ ya. Companylọ ọrụ ahụ kwadoro ka ị soro usoro ndị a:
Jiri LastPass vault dị ka usoro mmalite (ya bụ, malite ọrụ ozugbo si LastPass volt). Nke a bụ ụzọ kachasị dịrị nchebe iji nweta nzere gị na saịtị gị ruo mgbe edozi nsogbu a.
Companylọ ọrụ ahụ, ozugbo ọ nyochachara mmalite nke nsogbu ahụ, ga-ekpughere nkọwa na ọ bụ naanị mgbe ahụ ka ọ ga-ekwupụta na e mechiri nsogbu ahụ kpamkpam. Ruo ugbu a ọ mara na ọgụ ahụ ejirila usoro ọkaibe nke ukwuu.
Mmalite ya dị ka ihe nchọgharị ahụ Google Chrome mana adighi abanye ozo. Onye nyocha Google weputara ozi a. Companylọ ọrụ ahụ mere mwakpo a n'ihu ọha na ọkwa na-esonụ:
Na izu ụka, Google na-eme nchọpụta banyere nchebe Tavis ormandy kọrọ banyere onye ahịa ọhụụ na ndọtị ọrụ LastPass. Anyị na-arụsi ọrụ ike ugbu a banyere nsogbu. Mwakpo a bụ ihe pụrụ iche na ọkaibe. Anyị achọghị igosipụta ihe a kapịrị ọnụ banyere adịghị ike ma ọ bụ ihe ngwọta anyị nke nwere ike ikpughe nyocha, yana nsonaazụ ọjọọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » LastPass ghotara onodu adighi nma ma dikwa ndi oru ya aka na nti ka ha gbochie ha